ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း
Apply for Obtaining the Recommendation for Import of Chemical and Related Substances
The applicant shall apply the recommendation for import of chemical and related substances by filling up "the applying the recommendation for import of chemical and related substances" (Form-4) together with described documents to the Central Supervisory Board in Ministry of Industry.
Copy of sale contract
The Material Safety Data Sheet (MSDS)
There is no fee for applying and taking the recommendation letter.
Application Letter using company letter head signed by Managing Director or Director (Attachment: The copy of National Registration Card or Citizenship Scrutiny Card of MD or Director)
Copy of proforma invoice
Analysis report from Department of Research and Innovation in Ministry of Education
Copy of company registration including of Form VI, Form XXVI
Step (1) - Application for Obtaining the Recommendation for Import of Chemical and Related Substances
The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in Form(4) are completely described and the documents which shall be submitted with attachment are completed in respect of applying under rule 20. It will inform to the applicant if the submission is not in line with stipulations or require the other facts.
Step (2)- Rescrutinizing the application form of recommendation and required documents.
Step (3) - Signing of Chairman and Secretary of Central Supervisory Board
Step(4)- Registering and taking out of recommendation
If the applicant can't take out by himself/ herself the recommendation, the agent who is the behalf of applicant shall bring the original National Registration Card and the copy of it together with authorization letter.
Duration of the recommendation is only valid for (6) months.
Chairman, The Central Supervisory Board
Ministry of Industry, Office No.(30), Nay Pyi Taw
Phone : 067-3405324, Fax : 0673405052
e-mail : myanmarchemical@gmail.com
ရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင်ရာတွင် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ
Publication Date : 08-01-2019
ရွှေသတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုဒ်နှင့် ပြဒါးဓာတုပစ္စည်းများ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
Publication Date : 07-01-2019
Publication Date : 14-07-2015
Language : Myanmar Version
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ WATER ANALYSIS PHOTOMETER (15)NOS ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Agency : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Closing Date : 2020-02-20
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Agency : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Closing Date : 2020-02-14
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ BOPP Tape(2"×100 yards) ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအဝယ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Agency : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Closing Date : 2020-01-29
ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံတွင်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်ခွင့် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ(၁၃) (နည်းဥပဒေ ၂၂)
ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ(၄) (နည်းဥပဒေ ၂၀)
ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ(၃) (နည်းဥပဒေ ၂၀)
ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)နှင့် ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အလုပ်ရုံစိတ်မှူးရာထူး(၂၀)နေရာသို့ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသူများ၏ အမည်စာရင်းအား ကြေညာခြင်း
Agency : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : 2019-03-11
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)နှင့် ဆေးဝါး စက်ရုံ(အင်ရောင်း) တို့တွင် လစာနှုန်း(၂၁၆,၀၀၀-၂,၀၀၀-၂၂၆,၀၀၀)တန်း အလုပ်ရုံစိတ်မှူး ရာထူးအတွက် B.Pharm, B.Med.Tech( Medical Laboratory Technology) , M.Sc(Biotechnology)နှင့် M.Sc(Chemistry)ဘွဲ့ရများအား အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Agency : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : 2018-12-14
မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး
2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအဝေးကျင်းပ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ